News - Waa war wanaagsan oo ku saabsan samaynta aluminium
Isticmaalka alwaaxda badan ee dhismaha magaalooyinka ayaa horseeday xaaluf xad dhaaf ah, wasakheynta culus ee qashinka dhismaha, iyo waxyeelo ba'an oo soo gaadhay deegaanka deegaanka. Baahinta iyo adeegsiga nidaamka caaryada aluminium waxay ka dhigeysaa dhismaha dhismaha mid ka fiican, ka dhakhso badan oo ka dhaqaale badan, iyadoo la raacayo yareynta qiiqa kaarboon-ka-baxa iyo tikniyoolajiyadda dhismaha cagaaran, waana hal-abuurnimo weyn oo ku saabsan dhismaha dhismaha.
Waxaa naga go'an inaan kor u qaadno isbeddelka iyo casriyeynta warshadaha dhismaha iyo bixinta xalka cagaaran ee dhismaha magaalooyinka. Kooxda R&D oo leh xarun tiknoolajiyad ganacsi oo qaran ahaan loo aqoonsan yahay iyo khabiiro maarayn ku raaxeysanaya gunooyin qaas ah oo ka socda Golaha Gobolka, waxay u hoggaansamaan R&D iyo hal-abuurka alaabada caaryada aluminium, waxayna si xoog leh kor ugu qaadeysaa nidaamka jiido-tab. Nidaamka aluminium ee ugu horreeya ee nidaamka xaashida buuxa lagu dhejiyo ayaa lagu dabaqayaa mashaariic aad u sarreeya, wuxuuna ku guuleystay suuqa si heer sare ah loo aqoonsaday macaamiisha.
Waxaan bixinaa adeegyo qaabeynta qaabeynta qaabeynta qaabeynta qaabdhismeedka aluminium si dhismahu u noqdo mid waxtar badan isla markaana abuura natiijooyin wanaagsan oo leh qaabab yar. Naqshadeeyay in kabadan kun dhisme oo si guul leh u xaliyay dhowr mushkiladood oo warshadeed sida dherer aad u sarreeya, dhismayaasha dabaqyada ah, sagxadaha hoose, dhismooyinka isku imaatinka horay loo sii diyaariyay, iyo marinnada tubbada dhulka hoostiisa mara.
Maareyn jaango'an, maareyn adag iyo xakameynta geeddi-socod kasta oo hawlgal ah, si loo hubiyo in alaabooyinka loo dhiibo cilado cillad la'aan ah.
Bixi aluminium qashin ah, foomka qashinka beddelka qaab-dhismeedka qaab-dhismeedka, guddiga caadiga ah
Ganacsiga dib-u-warshadaynta aluminiumku wuxuu ka gudbay shahaadada ASI, saldhigga dib-u-warshadaynta aluminium, wuxuu dhiirrigeliyaa horumarka cagaaran iyo waara ee warshadaha aluminium.
Waqtigan xaadirka ah, wax soo saarkooda iyo adeegyadoodu waxay ka kooban yihiin 18 gobol iyo magaalooyin dalka oo dhan, waxaana loo dhoofiyaa Koonfur-bari Aasiya, Afrika iyo gobollada kale ee dibedda. Waxay si dhakhso leh ugu kortay shirkad farsamo qaab dhismeed heerkeedu sareeyo oo heer sare ah.
Hada waqtigan qaaska ah, ee saamaynta Corona ku leh waddan kasta. Waxaan bixinaa qiimo gaar ah si aan uga caawino suuqa dhismaha inuu soo kabsado. Si diirran u soo dhawow weydiimahaaga.
Iskuxidhka Birta Cuplock, Culus Waajibaadka Isku-dhafka Ringlock, Kwikstage Qalabka Isboortiga, Iskeelka Iskeelka Isku-dhejiska ah ee Jack, Qaybo ka mid ah Isgoysyada Ringlock, Qaybta 'Ringlock Scaffolding Bracket',